क्यानको भारत मोह ! नेपाली टिममा यी भारतीय 'फिटनेस ट्रेनर' नियुक्त |
२०७७, ७ मंसिर आईतवार १३:१२ November 22, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लागि ‘फिटनेस ट्रेनर’ नियुक्त गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अनुसार भारतका आशय हतकर नेपाली टिमको फिटनेस ट्रेनरमा नियुक्त भएका छन्। उनी मंसिर १० गतेदेखि सुरु हुने नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि फिटनेस ट्रेनर नियुक्त भएका हुन्। हतकर भारतको ‘ओलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट’ नामक संस्थाको सहायक स्ट्रेन्थ एण्ड कन्डिसनिंग कोच रहेर काम गरिसकेका छन्। फिटनेस क्षेत्रमा उनको १२ वर्षको अनुभव रहेको छ।
क्यानले ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा २२ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीमा बन्द प्रशिक्षण नौ महिना ढिला भएको हो। बन्द प्रशिक्षण शुरु हुनुअघि ती सबै खेलाडी तथा प्रशिक्षकको पिसिआर परीक्षण गरिनेछ। क्यानले आवश्यक सबै सावधानी अपनाएर प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ। क्यानले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण मंसिर १० गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु गर्ने जनाएको छ । आगामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुलाई मध्यनजर गर्दै क्रिकेट टोलीको पशिक्षण सुरु गर्न लागेको क्यानले जनाएको छ ।
हालको अवस्थामा नेपाल सरकारको नीति निर्देशनअनुसारको सावधानीका उपाय एवं सुरक्षा नीतिको अवलम्बन गर्दै काठमाडौंमा बन्द प्रशिक्षण शिविर सञ्‍चालन गर्न लागेको क्यानले जनाएको छ । त्यसका लागि क्यानले मंसिर ८ गते कोरोना परीक्षण गर्न लागेको हो । कोरोना परिक्षणपछि रिपोर्ट नेगेटिभ आउने खेलाडीलाई मात्र बन्द प्रशिक्षणमा समावेश गरिनेसमेत क्यानले जानकारी दिएको छ ।
वसन्त रेग्मी झण्डै डेढ वर्षपछि प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। नेपालले विश्वकप लिग क्रिकेट दुईअन्तर्गत सन् २०२१ मा पाँच सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। त्यसैको तयारीका लागि खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो।
सन्दिपलाई कुनै टिमले नकिनेको लंका लिग यी स्टार खेलाडीले नखेल्ने, यस्तो छ कारण
बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी : ज्ञानेन्द्र मल्ल (कप्तान), दीपेन्द्रसिंह ऐरी (उप-कप्तान), पारस खड्का, करण केसी, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, सुशन भारी, ललितनारायण राजवंशी, पवन सर्राफ, अभिनाश बोहोरा, रोहितकुमार पौडेल, कुशल मल्ल, कमलसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, भुवन कार्की, मो. आरिफ सेख, सुवास खकुरेल, रासिद खान र किशोर महतो प्रशिक्षक : जगतबहादुर टमाटा